Diinta Eebbaa leh, dalkana waa wadaagnaa! – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Dhanka kale, bulshada reer miyiga ahi waxay ku sheeggan tahay in ay adduunyada daneeyaan in ka badan inta ay aakhiro daneeyaan. Waxaana la yiraahdaa dhaqatadu waxay leeyihiin dhaqan calmaani (=secular) ah oo halganka nolosha adduunyada ku mashquula, laakiin aan si weyn isugu mashquulin arrimaha maqan (al-Geybiyaat). Tusaale ahaan, dhacdada taariikhda Islaamka ku caanbaxday magaca “dhacdadii maroodiga/حادثة الفيل”waxay noo sheegaysaa in markii Abraha uu ku duulay Maka si uu u burburiyo Kacbada, uu Abuu Daalib ergo ahaan ugu tagay kana codsaday in boqorku geelooda u soo celiyo isaga oo dooddiisa ku saleeyey oraahda caanka ah ee: “Anigu geela ayaan leeyahay, Gurigana (=Kacbada) waxaa leh Rabbi ilaashanaya/أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه”. Si taa la mid ah, Soomaaligii xoolo dhaqatada ahaa wuxuu ahaa mid diyaar u ah inuu u dhinto halihiisa dartood, laakiin way adkayd in uu Alle darti u dhinto. Soomaaliduna waa kuwa wariya sheekada tiraahda: “Alle iyo Catoosh baa nagu hardamaya, dhanka Catoosh baana u badannay!”.